ကော် Foam တိပ်
ဖိအားခလုတ်၏အထွေထွေစျေးနှုန်းကဘာလဲ။ သင့်အားအပြည့်အဝနားလည်နိုင်ရန် Changzhou ဖိအား switch သည်ထုတ်လုပ်သူများ!
21-07-20 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာတွင်ဖိအားတိုင်းတာရန်လိုအပ်သောအရာများ၊ ဓာတု၊ စက်ယန္တရား၊ ဟိုက်ဒရောလစ်နှင့်ရေအားလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာအသုံးချခြင်းများကဲ့သို့သောဖိအားများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
21-07-13 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
A. ဖန်ဖိုင်ဘာလူမီနီယံသတ္တုပါးတိပ်နှင့်လူမီနီယံသတ္တုပါးတိပ်အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ ဖန်မျှင်ထည်အလူမီနီယံသတ္တုပါးအထည်တိပ်သည်ထူးခြားသောအဆင့်မြင့်ပေါင်းစပ်လုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြု၍ ...
လူမီနီယံသတ္တုပါးတိပ် - ကောင်းကင်သို့ပျံသန်းနိုင်သည့်မှော်တိပ်
21-07-07 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
နိုင်ငံခြားခရီးသည်တစ် ဦး သည်လေယာဉ်မပြုပြင်မီလေယာဉ်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းများသည်အင်ဂျင်ထည်ကိုတိပ်ခတ်ထားသည်ကိုတွေ့သောအခါအလွန်အံ့အားသင့်ခဲ့ကြသည်။ မြင်ကွင်းကိုရိုက်ကူးပြီးအင်တာနက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်။ လေယာဉ်ကွင်းပြင်ရန်တိပ်ဖြင့်သုံးခြင်း၏ဘေးအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများမေးသည်။
Egret MOPP တိပ်ခွေ။
21-05-20 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
Jiangsu ပြည်နယ်၊ Changzhou မြို့တွင် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သော Egret Tape သည်areရိယာ ၁၃,၀၀၀ 13ရိယာအကျယ်အဝန်းရှိပြီးစတုရန်းမီတာ ၂၀၀၀၀ အကျယ်ရှိသောဆောက်လုပ်ရေးwithရိယာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကကော်ထုတ်ကုန်များကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ ပထမတစ်ခုမှာကော်ကပ်တိပ်ဖြစ်သည့်လူမီနီယံသတ္တုပြား၊ PE ...
butyl အပူဒဏ်ခံရေမြှုပ်ထုတ်ကုန်များနှင့်လျှောက်လွှာနည်းစနစ်များတွင် EPDM ရေမြှုပ်တိပ်၏အခန်းကဏ္.ကို
ဘူတေးလ်ရာသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဓာတ်ငွေ့စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းနှင့်အပူခံနိုင်ရည်ရှိပြီးအမျိုးမျိုးသောအပူဒဏ်ခံရော်ဘာထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရာတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုထားသောကြောင့်အပူခံနိုင်ရည်ရှိရေမြှုပ်ရာဘာထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ များစွာသောအတွင်းပိုင်းပြွန်အပြောင်းအလဲနဲ့ထုတ်လုပ်သူများက butyl အတွင်းပိုင်းဟာ ...
လူမီနီယမ်သတ္တုပါးတိပ်နှင့်ပတ်သက်လာလျှင်၎င်းအားကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအကျွမ်းတဝင်ရှိသင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ၎င်းကိုအိမ်သုံးပစ္စည်းအမျိုးအစားများတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ပထမ ဦး စွာအလူမီနီယမ်သတ္တုပါးတိပ်ကိုဖိအားကိုထိခိုက်လွယ်သောကော်ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားပြီးအလူမီနီယံသတ္တုပါး၏မြင့်မားသောလက္ခဏာများ ...
21-01-12 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
အသံမြှင့်ခြင်း၊ လျှပ်ကာခြင်း၊ gasketing၊ cushinging / padding နှင့်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းများအတွက်အမြှုပ်တိပ်များကိုအသုံးပြုပြီးသွင်ပြင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့်သင်၏ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ မြှုပ်တိပ်တစ်ခုစီတွင်ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အကောင်းဆုံးရည်ရွယ်ချက်များရှိသည်။ ဒီတိပ်ခွေတချို့ကိုမူအမျိုးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
20-12-01 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
ပထမ ဦး စွာလူမီနီယမ်တိပ်သည်အရည်အသွေးမြင့်ဖိအားဒဏ်ခံကော်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ထို့အပြင်အလူမီနီယမ်သတ္တုပါးသည်အပူချိန်မြင့်မားသောခံနိုင်ရည်နှင့်လေထုစိမ့် ၀ င်မှု၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သက်တမ်းတွင်အသုံးချနိုင်သောအပူထိန်းသိမ်းခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ရောင်ပြန်ဟပ်လက္ခဏာများရှိသည်။